Barclays Bank oo xidhay Inta Badan Xisaabaadkii Xawaaladaha Soomaalida iyo Xildhibaanno baaq u diray Xukuumadda UK | Salaan Media
Barclays Bank oo xidhay Inta Badan Xisaabaadkii Xawaaladaha Soomaalida iyo Xildhibaanno baaq u diray Xukuumadda UK
Khamiis, July 11, 2013 (SM) — Barclays Bank oo ah bankiga ugu weyn UK oo lacagaha kaashka ah u kala gudbin jiray xawaaladaha Soomaalida ayaa ku dhawaaqay inuu xidhay 100 sanaadiiq xisaabaad ah oo ay ku laahayeen xawaaladaha Soomaaliya, inkastoo tiro yar oo xawaalado ah uu u oglaaday inay weli isticmaalaan bangiga.
Xawaaladaha weli furasaha sii haysta waxaa ka mid ah xawaaladda Dahab-shiil, iyadoo mas’uulka ugu sarreeya shirkaddan uu sheegay inay dadaal ugu jiraan sidii ay howshooda u sii wadan lahaayeen, haddii uu bangigu go’aan ku gaaro inuu ka xirana ay bangiyo kale ku wareegi doonaan.
Sababaha keentay in xisaabaadka xawaaladaha la xidho ayuu Barclays Bank ku sheegay in xawaaladaha Soomaalidu aysan intooda badan lahayn xisaab celinta uuna baqdin ka qabo in lacagaha la diro qaarkood ay ku dhacaaan gacmo aan sharci ahayn.
“Waxaan wadahadallo kula jirnaa bankiyo kale oo ku yaalla Britain, runtiina waxaan sidoo kale wadahadal kula jirnaa bangiga Barclays oo muddo dheer aan isticmaalaynay, waxaana Alle mahaddii ah inaanay Dahab-shiil ku jirin xawaaladaha xisaabaadkooda la xidhay,” ayuu yidhi C/rashiid Maxamed Ducaale oo ah madaxa shirkadda Dahab-shiil oo London ku sugan.
Go’aanka Barclays uu ku xidhay xawaaladaha Soomaalida ayaa wuxuu sare u qaaday walaaca dadka Soomaalida ah ay ka qabaan inay ka go’aan dhaqaale ay ehelladooda ku nool dalka Britain ka heli jireen, iyadoo sidoo kale walaac kaas la mid ah ay qabaan hay’adaha samafalka.
Hay’adaha samafalka ayaa sheegay in 40% dadka Soomaaliyeed ay nolol ahaan ku tiirsan yihiin dhaqaalaha ay ka helaan ehelladooda ku nool dalka dibaddiisa, tanina ay noqon karto caqabad weyn oo dadkaas oo food-saarta.
“Inta badan xawaaladaha lacagaha kala gudbiyo ee Soomaaliya ma lahan wax raad-raac ah oo ku saabsan halka ay lacagta rasmi ahaan ugu diraan, tani waxay keentay in baqdin laga qaado in lacagaha qaarkood ay gacanta u galaan kooxaha argagaxisada,” ayaa lagu yidhi warsaxaafadeed uu bangigu soo saaray bishii hore.
OXFAM oo ka mid ah ha’yadaha samfalka ee dalka Britain ayaa sheegtay in go’aanka bangiga uu qaatay ay a wanaagsanaan lahayd in baaritaanno lagu sameeyo goobaha ay xawaaladuhu lacagaha u diraan, isagoo sheegay in tani ay caqabad ballaaran ku keenayso dadkii dhaqaalaha ka heli jiray Britain.
Dhanka kale, xildhibaanno ka tisran baarlamaanka Britain oo kasoo jeeda xisbiga shaqaalaha ee dalkaas baaq u diray xukuumadda Britain iyagoo ka digay in tallaabada Barclays bank uu qaatay ay dhibaato ku keeni karto dadka ku nool dalalka soo koraya oo ay Soomaaliya ka mid tahay.
Xildhibaanadan oo tiradoodu gaarayso 15 xubnood ayaa waxay dadaal ugu jiraan inay kordhiyaan tiradooda, si ay xukuumadda dalkaas cadaadis ugu saaraan inay keeno qorshe kale oo aanay ku joogsan xawaaladaha lacagaha loogu diro dadka ku nool Soomaaliya.